Hiaino Ny Salegy, Ilay Mozika Mitana Toerana Be Ao Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2014 7:48 GMT
Eusebe Jaojoby, heverina ho mpanjakan'ny salegy, manao fampisehoana miaraka amin'ny “TANA GOSPEL CHOIR” – 2009. Sary nalain'i carlos mpampiasa Flickr. CC BY-NC-ND 2.0
Ity lahatsoratr'i Banning Eyre ho an'ny Afropop Worldwide dia navoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 21 Desmabra 2014 ary naverina navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Rehefa mety ho alin'ny faran'ny herinandro ao amin'ny “Jao’s Pub”, toeram-pilanonana amin'ny alina malaza ao Antananarivo, Madagasikara, dia hahita sehatra mientanentana ianao: lalantsara natao handihizana rakotr'ireo lehilahy sy vehivavy tsara fitafy, tanora no ankamaroany, miolankolana mahafinaritra manaraka ny gadona 6/8 groove avy amin'ny feo miritsok'ilay tarika.
Indrindray zareo miditra amin'ny fitehàfana manaraka gadona, na rombo. Matanjaka sy re lavitra ireo feon'antso-mivaly ataon'ilay tarika, nefa manainga fanahy toy ilay gadona rahateo. Ny rindram-peo n'ny angorodao, laroin'ny feon-gitara mandeha amin'ny herinaratra, ny dobodoboky ny beso sy ny gadona miaraka tsy mitsahatra ao anaty fifandrindràna tsara rindra. Miara-mientana toy ny vatana iray ireo mpitendry sy ny mpandihy.
Raha tarika tanora no mika-tsehatra, milalao tsy an-kiato ry zareo, tonga dia mitohy miova amin'izay hira manaraka eo ary manalava ny fihenjanenjanan'ny daholobe mandritry ny alina tontolo. Tontolo iray tsy hitanao afa-tsy ao Madagasikara io: io no salegy.
Karazana mozikam-pandihizana iray amin'ireo malaza indrindra ao Madagasikara ny Salegy, hatrany amin'ny tapaky ny taonjato faha-20. Mbola ampifandraisin'ny olona hatrany amin'ny faritra avaratra io mozika io, miampita fotsiny ny Lakandranon'i Môzambika avy eo Afrika Atsinanana, saingy ankehitriny dia azonao renesina any rehetra any manerana io nosy io izany.
Mamàka any amin'ireo gadona nentin-drazana fahiny ny Salegy, saingy tonga ny fotoana tao anatin'ireo taona nisian'ny fanantenana nanaraka ny Ady Lehibe Faharoa, rehefa injay nasiam-panavaozana ireo karazana mozika zanatany samihafa mba hifanaraka amin'ny vaninandro maoderina. Iray amin'ireo bekotro maroholatry ny salegy i Eusebe Jaojoby, izay nanomboka nihira vakodrazana tany aminà vohitra iray ary nihira tany anatin'ny sasany tamin'ireo tarika mpiangaly salegy niforona tany Diego Suarez, faritra avaratry ny firenena, .
Nampitsinjaka an'Antananarivo tany amin'ny taona 1970 tany ny tarika Jaojoby izay mitondra ny anarany rahateo ary nanomboka nànana ny lazany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenana tany amin'ny taona 90. Ankehitriny dia tompony sy mampiodina ny “Jao’s Pub” i Jaojoby, ary ny tarika ao aminy — na ilay tariky ny fianakaviany — no mampitsinjaka ao isaky ny Sabotsy alina.
Amin'izao androntsika izao, ampanginin'ireo kintana tanora toa an-dry Ali Mourad sy Wawa ny feon-gitara ary ampiakariny ho amin'ny gadona ankafizin'ny tanora kokoa ny feon-javamaneno. Mandeha lavidavitra kokoa ireo mpanakanto toa an'i Tence Mena sy Vaiavy Chilla, mampivady ireo feo mahazatra amin'ireo feo avy amin'ny teknolojia ankehitriny avy ao Afrika, toy ny coupé-decalé avy any Côte d'Ivoire sy ny ndombolo avy any Congo. Nanao lahatsary mafampàna, manàla azy ihany koa ry zareo, izay manakiana ny fiainana maoderina ao amin'ity nosy mientanentana nefa misedra olana ara-politika sy toekarena ity.
Manome fampidirana feno ho ao anatin'ny tontolon'ny salegy ireto lahtsary ireto. Voalohany, indro ny fanambàrana ireo lahatsary an-tsehatra nataon'i Jaojoby an-taona maro :
Ity ny iray hafa ahitàna an'i Lego, isan'ny goavana amin'ny fiangaliana ny salegy tsotra mahazatra. Ity lahatsary tamin'ny 2013 ity dia manomboka amin'ny fomba fiangaliana nentin-drazana, manasongadina ny amponga, ny angorodao ary ny feo :
Mba hanakàrana ny tena fototra niteraka ny salegy, ity misy lahatsary iray an'ny tarika Afropop noraketina tao Diego Suarez, any avaratr'i Madagasikara. Eto dia i Candela mpitendry angorodao sady lehiben'ny tarika no mitantana andiam-pitendry iray, manome andran-tsira sahady ny mety ho endriky ny mozika rehefa eny an-toerana niaviany. Lahatsary tsy matianina ity, tsy lafatra raha resaka fandraketana, saingy izay tsy feno tamin'ny lafiny teknika dia manome toerana kosa ny fanahy sy ny lafiny maha-mozika ny mozika.
Amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra avaratr'i Diego Suarez, miezaka mampiroborobo ny gadon-kira lazain-dry zareo amin'ny hoe salegy gouma ireo mpankanto mbola tanora. Malaky be, mavitribitrika sy mampandray anjara betsaka ny mpanotrona izy ity. Afaka hahatsapànao izany ity lahatsary ity, nalaina tamin'ny seho an-tsehatra nataon'ny Afropop tao amin'ny “Jao’s Pub”, toeram-pilanonana rehefa alina an'i Jaojoby, ao Antananarivo. i Ali Mourad avy any Deigo Suarez no mpanakanto eto — indraindray Aly Mourady.
Izao indray dia ny gadona amin'izao fotoana izao iangalian'i Tence Mena, izay ankehitriny dia iray amin'ireo mpihira nahomby sy tena malaza ao Madagasikara. Toy ny voamarika tery ambony, noraisin'i Tence Mena daholo ireo karazana gadona mozika vahiny, saingy mbola renao hatrany hoe ny salegy no fototra niaingàny.
Tence Mena no manao ireny lahatsary isan'ny ahitàna asa famoronana ireny ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mba jereo anie ilay hirany hoe “Soa’G” e! Ara-teknika dia tsy tena salegy io, saingy mampiseho ny fanosehan'ity tanora mpanakanto ity ny fetran'ny fitoviana lenta. Tsilalaonteny ny hoe “Soa” hilazana hatsaràna tsangànana, fitafy sy ny sisa, fa amin'ny Malagasy, midika ihany koa hoe tsara sy mahafinaritra. G dia hoe “gasy,” toy ny hoe Malagasy. Ny hafatra dia ny tokony hampirehareha amin'ny maha-Malagasy. Indro ilay lahatsary, ary mendrika ny hojerena hatramin'ny farany!
Tamin'ny Lohataon'ny 2014, nisy andiany mpamokatra avy amin'ny PRI Afropop Worldwide nivahiny tao amin'ny Nosy Madagasikara ao amin'ny Ranomasimbe Indiana, nitety ilay firenena mba hanangona zavatra ho ana andiam-pandaharana telo fandefa amin'ny fampielezampeo, nitrandrahana ny kolontsaina sy ny mozika tokamiavak'ilay firenena. Ho andran-tsira ho anareo mikasika ilay seho, i Banning Eyre zokiny amin'ny mpamokatra ao amin'ny Afropop dia nanambatra ity fitetezana amin'ny alàlan'ny mozika ity ho ao anatin'ny fandaharana ara-tsokajy ny mozika, salegy. Raha hitady mozika misimisy kokoa avy ao Madagasikara, aza adino ny mitsidika ny Afropop.org sy manao famandrihana amin'ny podcast an'ny Afropop.